Scholarship နဲ့မဟုတ်​ဘဲ ကိုယ်​ပိုင်​စရိတ်​ဖြင့်​သွားလိုသူ ​ကျောင်းသား/​ကျောင်းသူများအတွက် ၂၀၁၉ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ တွင်ဂျပန်နိုင်ငံသို့ သွားရောက် ပညာသင်လိုသူ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်
(၁) ဘွဲ့လက်မှတ်ရှိသူ (သို့) တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ကျောင်းပြီးထား သူဖြစ်ရမည်။
Has Bachelor’s degree or above with good grades.
(၂) အသက် ၂၀ ကနေ ၃၀ အတွင်းဖြစ်ရမည်။
In age 20 between 30
(၃) JLPT N5 နှင့် အထက်အောင်မြင်ပြီးသူ။ Nat-Test ဖြစ်လျှင် N4နှင့်အထက် အောင်မြင်ပြီးသူ။
Passed JLPT N5 or above. If Nat-Test,..N4 Level or above.
(၄) ထောက်ပံ့ပေးသူမှာ မိဘဖြစ်ရမည်။
Sponsor must be one of applicant’s parents.
(၅) ဂျပန်စာ နှင့် အင်္ဂလိပ်စာ ဖြင့်ဆက်သွယ်ပြောကြားနိုင်ရမည်။
Be able to communicate in Japanese and English.
ဆက်သွယ်ရန် - No.44, Pyay Road, Dagon Tsp, Yangon, Myanmar. AKAMONKAI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL
ဖုန်း - ၀၉-၄၅၄ ၀၁၁ ၈၁၉
Source: AKAMONKAI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL YANGON
Personal allowances with those you visit to japan
More in this category: « မန္တလေးတက္ကသိုလ်တွင် စာဖတ်စွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲ ပြုလုပ်မည်	၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင်နှစ် တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ် ဆရာ၊ ဆရာမများ နွေရာသီ အားလပ်ရက် သတ်မှတ်ခြင်း »
ဝင်ခွင့်ရ တက္ကသိုလ်များ၌ ယခုလ ၁၅ ရက်မှစ၍ ကျောင်းအပ် လက်ခံမည်
မြန်မာနိုင်ငံရှိ အဆင့်အမြင့်ဆုံး တက္ကသိုလ်များစာရင်း
နိုင်ငံတော်ပရိယတ္တိ သာသနာ့တက္ကသိုလ်များ ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားနိုင်
၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင်နှစ် တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ် ဆရာ၊ ဆရာမများ နွေရာသီ အားလပ်ရက် သတ်မှတ်ခြင်း